नेपाली इसाई चलचित्र नचल्नुमा दर्शकहरूलाई दोष दिन मिल्दैन | Nepali Christians
नेपाली इसाई चलचित्र नचल्नुमा दर्शकहरूलाई दोष दिन मिल्दैन
January 17, 2016 12:19 pm by: Admin Category: Interviews A+ / A-
छोटो समयमा नै नयाँ सोच, नयाँ दृश्यावलोकन र आधुनिक व्यवस्थापनलाई अँगाल्दै इसाई चलचित्रमा अगाडी बढ्न सफल यूवा निर्देशक तथा कलाकार ‘गल्छेडो’ चलचित्रका निर्देशक जमन बिष्टसँगको अन्तर्वार्ता (इसाई पुस्तिका “सादृश्य”मा प्रकाशित) यसप्रकार छ :
♦ आजकल केमा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
भर्खरै फिल्म कलेजबाट ग्रेजुएट भएँ । अहिले हाल लेख्ने, पढ्ने र कामहरूको तयारी गर्ने, यस्तै नै छ भन्नुपर्यो ।
♦ तपाईंको बारेमा छोटकरीमा बताईदिनुस् न ।
प्रभुको बोलावटलाई बुझेर मिडियामार्फत् काम गर्नको लागि आफुलाई तयार गर्दैछु । मेरो बारेमा भन्नुपर्ने यति नै हो जस्तो लाग्छ ।
♦ चलचित्र क्षेत्रमा तपाईंको चासो कसरी बढ्यो ?
स्कुल पढ्ने बेलादेखि नै चित्रकला, स्टेज नाटकजस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउने गर्दथें । त्यसले नै बिस्तारै फिल्मी क्षेत्रमा तान्यो ।
♦ कहिलेदेखि तपाईं यस क्षेत्रमा लाग्नुभयो ?
म सानैदेखि नै यस क्षेत्रमा लगाव राख्ने मान्छे रहेछु भनेर अहिले आएर बुझ्दैछु । म झुक्किएर यो क्षेत्रमा लागेको होइन रहेछ भन्ने लाग्दैछ । चित्रकला वा स्टेज नाटक सानो क्यानभास हुन् भने चलचित्र ठुलो क्यानभास । धन्यवादी छु प्रभुप्रति कि सानै उमेरदेखि सिक्ने मौका दिनुभयो ।
♦ तपाईं चलचित्र क्षेत्रका कुन कुन भूमिकामा संलग्न हुनुहुन्छ ?
मुख्य रुपमा पटकथा लेखन र निर्देशनको काममा संलग्न छु । म यही क्षेत्रमा ग्रेजुएट हुने अवसर पाएँ । यसका साथसाथै कथा र टीम राम्रो भएको अवस्थामा प्रोडक्सन, सेट रनिङ, लोकेसन म्यानेजमेन्टदेखि कलाकारको रूपमा पनि काम गरेको छु ।
♦ नेपाली इसाई चलचित्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ?
हामी नेपाली इसाई चलचित्रकर्मीहरूमा न अध्ययन छ, न हामीले समयको गतिलाई भेट्ने खालको चलचित्र नै बनाउन सकेका छौं । पाँचवटा फिल्म बिगारेर बल्ल राम्रो बनाउने सिक्ने, रहरले चलचित्र बनाउने, बिना दर्शन, बिना अध्ययन, बिना टिम चलचित्र बनाउने कस्सिने प्रवित्तिका कारणले यस्तो दुःखलाग्दो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ । नेपाली इसाई चलचित्र नचल्नुमा दर्शकहरूलाई दोष दिनुपर्ने कुनै कारण मैले देखेको छैन । तर आशा छ कि आउने दिनमा यो सबै कुराहरूमा सुधार आउनेछ । नयाँ पुस्ताले सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेर, पछिल्लो समयको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने खालको चलचित्र बनाउने संकेत देखा परिसकेको छ ।
♦ नेपाली इसाई चलचित्र उद्योगको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
उद्योग अझैं भैसकेको छैन होला । अहिले त एउटा सिजनजस्तो मात्रै छ, जुन वर्षमा ३ महिनामात्रै चल्छ । यो प्रश्नको जवाफ दिंदै गर्दा म आफैलाई पनि भित्रभित्रै पोलिराखेको छ ।
♦ इसाई चलचित्रप्रति मण्डली तथा इसाई संघसंस्थाहरूको सहयोगलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सबै त होइन, तर अधिकांसले साथ दिने गर्दछन्, मिडियाको महत्व बुझेका मण्डली तथा संस्थाहरूले त उहाँहरूको क्षमता भन्दा बढी काम गरेको पनि रेकर्ड छ । तर दुःख लाग्ने कुरा त के भने उहाँहरूको लगानीको प्रतिफल हामीले फिर्ता गर्न सकेका छैनौं ।
♦ दर्शकको रुचीअनुसार स्तरीय चलचित्र अझै बन्न नसकेको गुनासो छ नि ?
हरेक मानिसको आफ्नै आफ्नै रुची हुन्छ, सबैको रुचीलाई एउटा फिल्ममा समेट्न सकिंदैन । अझ म त भन्छु त्यस्तो फिल्म बनाउनु पनि हुँदैन । दर्शकले जे रुची राख्छन् त्यो दिने खालको चलचित्र भन्दा दर्शकको रुचीलाई नै बदल्न सक्ने क्षमताका चलचित्रहरू बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । चलचित्रले दर्शकहरूलाई चुनौती दिन सक्नुपर्दछ ।
♦ चलचित्रकर्मीहरू सबै संगठित छैनन् । एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हावी भएको हो ?
प्रभुको जन भएपछी कुनै पनि काम केका लागि, कसका लागि र किन भन्ने कुरा थाहा हुनु जरुरी हुन्छ । खुट्टा तान्ने प्रबृत्ति त चलचित्र क्षेत्रमा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा पाइन्छ ।
♦ सबै चलचित्रकर्मीहरूलाई एकतामा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
अघि माथि नै पनि भनिसकें कि केका लागि, कसका लागि र किन भन्ने थाहा पाएर सबैले काम गर्नुपर्छ । आफूमात्रै ठुलो हुँ, अरु सबै कमजोर र केहि नजान्नेहरू हुन् भन्ने विचार सबैले हटाउनुपर्छ । नत्र त लुसिफरले इसाई कलाकारहरूलाई आफ्नो चलचित्र खेलाउन थाल्नेछ ।
♦ अन्त्यमा हाम्रा पाठकहरूलाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?
चलचित्र मन परेमा अरुहरूलाई पनि हेर्नलाई उत्साह दिनुहोस्, त्यो पनि मागेर होइन किनेर । मन परेन भने हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् । सुधार गर्न सकिने ठाउँहरू देखाउनुहोस् । सबैलाई Happy Christmas and Happy New Year!
(इसाई पुस्तिका “सादृश्य”मा प्रकाशित)
नेपाली इसाई चलचित्र नचल्नुमा दर्शकहरूलाई दोष दिन मिल्दैन Reviewed by Admin on Jan 17 . छोटो समयमा नै नयाँ सोच, नयाँ दृश्यावलोकन र आधुनिक व्यवस्थापनलाई अँगाल्दै इसाई चलचित्रमा अगाडी बढ्न सफल यूवा निर्देशक तथा कलाकार ‘गल्छेडो’ चलचित्रका निर्देशक जम छोटो समयमा नै नयाँ सोच, नयाँ दृश्यावलोकन र आधुनिक व्यवस्थापनलाई अँगाल्दै इसाई चलचित्रमा अगाडी बढ्न सफल यूवा निर्देशक तथा कलाकार ‘गल्छेडो’ चलचित्रका निर्देशक जम Rating: 0
सत्यता बुझेका हामी, यो यूगमा ख्रीष्...देखाउनकै लागि आर्थिक सम्पन्नताको आध...